Mareykanka oo ka digayo in Norway loo safro, sababtan darteed. - NorSom News
Xarunta dowlada Mareykanka u qaabilsan xakameynta iyo kahortaga cudurada ( Centers for Disease Control and Prevention), ayaa qoraal ay soo saartay dadweynaha Mareykanka uga digtay inay u safraan dalal uu kamid yahay dalkan Norway.
Xarunta ayaa Norway iyo dhowr wadan oo kale galisay heerka 3-aad ee guduudka ah, kuwaas oo ah dalalka looga digayo dadweynaha Mareykanka inay u safraan, coronavirus awgiis. Waxeyna muwaadiniinta Mareykanka ah, gaar ahaan kuwa u nugul qaaditaanka xanuunka Covid-19,uga digtay inay u safraan Norway. Hadii kale ay halis ugu jiraan inay xanuunka qaadaan, Norweyna lagu xanibo.
Xarunta CDC-da Mareykanka ayaa sheegtay in xanuunka Covid-19 uu aad ugu dhex faafay dalka Norway. Hadii uu qofku ku dhex xanuunsadana Norway gudaheedana, ay dhici karto inuusan helin caawitaan caafimaad, maadaama awooda hey´addaha caafimaadka Norway ay aad u hooseyso.
Xarunta CDC-da Mareykanka ma aysan soo bandhigin waxa ay u cuskutay qiimeynta ay ku sameysay xaalada xanuunka Covid-19 ee Norway.
Norway iyo guud ahaan dalalka Nordica, marka laga reebo Sweden, waxaa lagu tirinayaa wadamada ilaa hada ku guuleystay xakameynta faafitaanka xanuunka Covid-19.
Halka dalka Mareykanka uu yahay dalka ugu saameynta ugu weyn aduunka ku yeeshay Corona-virus, isla markaana dhimashada ugu badan uu ka geystay. isku cel-celis waxaa xanuunkaas gudaha Mareykanka maalintii u dhinta, dadka u dhaxeeya 1500 ilaa 2000 qof.
Xigasho/kilde; USA advarer mot reiser til Norge
Previous articleWasaaradda A. Dibadda oo ku talineyso in dalalkan aan loo safrin.
Next articleW. Caafimaadka oo sheegay mawqifka dowlada ee marada afka(Munnbind)